Mareykanka oo xaqiijiyay inuu soo dhammaaday joogitaankiisii militari ee Afghanistan
Sarkaal sare oo ka tirsan Taalibaan ayaa VOA -da u sheegay, "Dhammaan xoogaggii ajinabiga ahaa ee dalka qabsaday waxay daqiiqado kahor ka baxeen dalka."
Madaxa diblomaasiyiinta Mareykanka ee Afghanistan, Ross Wilson ayaa soo raacay duulimaadkii ugu dambeeyay ee C-17.
'Waxaa jirta murugo badan oo la xiriirta ka bixitaankeenna. Ma aynaan soo saarin dad badan oo doonayay inaan ka soo saarno Afghanistan. Haddii aan sii joogi laheyn 10 maalmood oo kale qof kasta dibadda ayaan u soo saari laheyn" ayuu McKenzie u sheegay wariyeyaasha.
Madaxweynaha Mareykanka, Biden, ayaa dhaleeceyn xooggan kala kulmay xubnaha xisbigiisa iyo kan Jamhuuriga sida uu u maareeyay Afghanistan tan iyo markii Taaliban ay si degdeg ula wareegtay magaalada Kabul.
Warbixintan waxaa ku jira macluumaad aan ka soo xiganay Reuters.
Wixii warar ah ee ku soo kordha Afghanistan halkan ayaad kala socon doontaan.